Home Page COVID-19 – Mason City Zvikoro COVID-19 Makavakuru
SaMukuru wako, Ndinoda kuti uzive kuti tiripano kutsigira nekutarisira yedu nharaunda kuburikidza kutaurirana kusingaperi, zviwanikwa, uye tariro.
Patinofambira mberi kuburikidza nechiitiko ichi chakaoma, ticharamba tichikurukurirana – kukuzivisa iwe zvatinoziva, patinozviziva. Ndokumbirawo ubaye pazasi nekuda kwemashoko edu ezuva nezuva.
Gara Wakabatana munguva yeCCID-19 chiitiko
Musi waApril 6, isu tichashandura kune Remote Kudzidza Nzvimbo. Ipo vashandi vedu vanogadzirira shanduko iyi, iwe uchawana zviwanikwa zvakawanda zvakagadzirirwa mudzidzi wako.
Dzidza ZVIMWE: Kudzidza Kure
Dzidza zvakawanda nezveMason City Zvikoro 'hutano hwepfungwa hunotsigira. Tora marongero ekubata panguva ino.
Tsvaga kuti ungawana sei Chromebook kana mwana wako asina mudziyo. Dzidza maitiro ekuwana tsigiro kwevhiki dzinoenda.
Hapana mumwe munharaunda medu anofanirwa kufa nenzara. Tsvaga kuti ungawana sei chikafu, uye kuti MCS iri kutsigira sei mhuri dzedu yakatarisana nekushomeka kwechikafu.
Ino inguva yakakosha kwazvo kuvanhu vazhinji munharaunda medu. Isu tinoziva kuti yedu Comet CommUNITY yakagara yakagadzirira kubatsira. Tsvaga nzira dzekutsigira nadzo mhuri, mabhizinesi emuno (kunyanya avo mukugamuchira) nevamwe vanoda rubatsiro rwedu.
Wona mhinduro kumibvunzo yakajairika kubva kumhuri dzedu nenharaunda.
Corona Virus Mibvunzo Inopindurwa
Kubva kuVana Chipatara muCincinnati
Zvimwe COVID-19 Nyanzvi Zviwanikwa
Tave pano iwe ...
Mharidzo kubva kune vedu Vakuru
Kunyangwe panguva yakaoma, Ndiri kunzwa kuvimba mukati medu vashandi, vadzidzi nenharaunda nekuda kwedunhu redu 3 Matombo Makuru. Tiri kufunga nezvevadzidzi vedu uye mhuri panguva ino uye tinoda kuti muzive vashandi vedu vekusekondari vari pano kutipa isu sezvo isu tichitanga rwendo rutsva. Ipo ichi chiri chitsva dambudziko, Vashandi veMHS vanodada kwazvo "Kugara mune Moment" uye nekupindura kune zviitiko izvi kuitira kuti vadzidzi vedu nemhuri dzive nekukura zuva rega rega uye varambe vachizadzisa yedu Comettsika sevadzidzi. "
Bobby DoddMHS Mukuru
"Chikomborero chakadii kuti tanga tichishanda paCommet yedu Tsika nekunzwisisa kwedu E + R = O Chiitiko ichi chisati chauya COVID-19 isati yauya. "Ndiri kunzwa ndine rombo rakanaka kupindura pachiitiko chisina kujairika nharaunda yedu yeMason Comet."
Lauren GenteneMason Middle Chikoro Chikuru
“Vashandi vedu, vadzidzi nenharaunda vaifanira kudzidza kugadzirisa uye kuchinjika pane kubhururuka mumavhiki maviri apfuura. Vashandi paMI ndeve "Kuva neiyo Moment" uye kushanda kuti vagare vakabatana nevadzidzi uye kuronga zvidzidzo izvo zvinoenderera mberi kudzidza. Tinotadza kuona vadzidzi vedu zuva nezuva asi tinotarisira kutora rwendo rwuno pamwe chete. Gara uine hutano uye wakachengeteka! Gara MI Yakasimba!”
"Zvave zvichifadza kuona kuratidzwa kwemutsa uye tariro kubva kune yedu maMeets. Tiri kuenderera mberi nekurarama yedu yechikoro motto, 'Mutsa Unotanga naM .E.' nekusvikira kune nhengo dzeComet Nyika kuti ubatane navo uye uvazivise kuti tinovariritira.. "Mason Elementary staff yakazvipira kutsigira vadzidzi vedu uye mhuri."
"Hazvina kumbonyanya kuve zvakakosha kurarama kunze kweComet Kid stances uye nekushingirira.", tsitsi, kuchinjika, kutsungirira uye kutarisira tariro. Mhuri dzedu, vashandi nevadzidzi vese vanga vachigovana nyaya dzekuti kurarama kunze izvi hunhu kuri kushandura hupenyu chaiko mune ino nguva. Isu tinodada nevedu Comet Vana vari Mason Community!!”
Kuchengeta Vadzidzi vedu uye Mhuri ...
Kana chiri chikafu, hutano hwepfungwa hunotsigira, tekinoroji, kana zvekushandisa pakufunda - tiri pano kune yedu yeMason uye deerfield taundi yemunharaunda.